ယနေ့ခေတ်တွင်၊ တယ်လီဖုန်းအတွက်သာမက ရုပ်မြင်သံကြား၊ အင်တာနက်နှင့် ဘဏ်လုပ်ငန်းစသည့် အခြားဝန်ဆောင်မှုများအတွက်လည်း စျေးကွက်တွင် ကြိုတင်ငွေပေးကတ်အမျိုးအစားအားလုံးကို ရှာဖွေတွေ့ရှိလာကြသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် အသုံးပြုလိုသူများအတွက် ရည်ရွယ်ပါသည်။ အွန်လိုင်းတွင် အန္တရာယ်ကင်းစွာ ဝယ်ယူပါ။ သို့မဟုတ် သားသမီး သို့မဟုတ် ဆွေမျိုးများ၏ အသုံးစရိတ်ကို ထိန်းချုပ်လိုသူ။
Postepay သည် ကြိုတင်ငွေပေးကတ်ဖြင့် ရရှိနိုင်ပါသည်။ အီတလီစာတိုက်ဝန်ဆောင်မှုItalian Mail သည် အကောင့်ဖွင့်ရန် မလိုအပ်ဘဲ၊ ငွေပေးချေခြင်းနှင့် ထုတ်ယူရန်အတွက် အီတလီပြည်တွင်းနှင့် ပြင်ပတွင် လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး အွန်လိုင်းတွင် ဝယ်ယူမှုများပြုလုပ်ရန်လည်း အသုံးပြုနိုင်ပြီး PayPal နှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Postepay ကတ်များသည် အမည်မသိ၊ ကတ်တစ်ခုရယူရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုရန်လိုအပ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ စာရွက်စာတမ်း သို့မဟုတ် နိုင်ငံကူးလက်မှတ် နှင့် activation ကုန်ကျစရိတ်5ယူရိုပေးချေပါ။ အားပြန်သွင်းမှုတစ်ခုစီတွင် အသုံးပြုသည့်နည်းလမ်း မည်သို့ပင်ရှိစေကာမူ ပြန်လည်အားသွင်းသည့်ပမာဏမှ နုတ်ယူထားသည့် 1 ယူရို ကုန်ကျစရိတ်ရှိသည်။ ဒါပေမယ့် Postepay ကို ဘယ်လို အားပြန်သွင်းရမလဲ။
ဤတွင်များမှာ နည်းလမ်းအားလုံး Postepay ကြိုတင်ငွေပေးကတ်များကို အားပြန်သွင်းရန်။
Postepay သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ သဘောထားကို ပေးပါသည်။ ဤကြိုတင်ငွေပေးကတ်များကို ပြန်လည်အားဖြည့်ရန် ရွေးချယ်စရာအများအပြားရှိသည်။အသုံးပြုသူတိုင်းသည် ၎င်းတို့၏ ကတ်များ၏ လက်ကျန်ငွေကို ၎င်းတို့ရောက်ရှိနေသည့် နေရာတွင်ပင် မခွဲခြားဘဲ ၎င်းတို့၏ ကတ်များ၏ လက်ကျန်ငွေအား ပြန်လည်ဖြည့်သွင်းနိုင်စေမည့် နည်းလမ်းများ။
Italian Mail ဝဘ်ဆိုဒ်မှ
Postepay ကြိုတင်ငွေပေးကတ်ကို အားပြန်သွင်းရန် အမြန်ဆန်ဆုံးနှင့် အလွယ်ဆုံးနည်းလမ်းမှာ သင်၏စာမျက်နှာ [ဝဘ်] ကိုလည်ပတ်ခြင်း(https://www.postepay.it)။ ဤဝဘ်ဆိုက်မှ သင်သည် ကြိုတင်ငွေပေးကတ်ကို ပြန်လည်ဖြည့်တင်းရန် BancoPosta ကတ်ကို အသုံးပြုနိုင်ပြီး ၎င်းတို့သည် တူညီသောကိုင်ဆောင်ထားသူနှင့် သက်ဆိုင်သရွေ့ အခြား Postepay ကြိုတင်ငွေပေးကတ်မှ အခြားသို့ ငွေလွှဲနိုင်သည်။ Postepay ကြိုတင်ငွေပေးကတ်ကတ်မှတဆင့်လည်း အားပြန်သွင်းနိုင်ပါသည်။ ခရက်ဒစ် သို့မဟုတ် ဒက်ဘစ်ဘဏ်ကတ် Visa၊ Visa Electron၊ Vpay နှင့် Mastercard တို့မှ။
သင့်မိုဘိုင်းမှ သင်၏ Postepay ကြိုတင်ငွေပေးကတ်ကို ပြန်လည်အားဖြည့်လိုပါက ၎င်းတို့၏ဝဘ်ဆိုဒ်သို့ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခြင်းသည် ရွေးချယ်စရာတစ်ခုမဟုတ်ပါ။ ဤကိစ္စတွင်၊ အဆင်ပြေဆုံးနည်းလမ်းကိုအသုံးပြုပါ။ iOS နှင့် Android အတွက် ရရှိနိုင်သော အပလီကေးရှင်းအခမဲ့ဒေါင်းလုဒ်လုပ်နိုင်သော အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် အပလီကေးရှင်းကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီး ထည့်သွင်းပြီးသည်နှင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ အကောင့်အချက်အလက်ကို ထည့်သွင်းရပါမည်။ နောက်တစ်ခု၊ ကျွန်တော်တို့မှာ ရွေးချယ်ခွင့်ရှိတယ်။ ပိုက်ဆံလွှဲပြောင်းပါ ကျွန်ုပ်တို့၏ အကောင့်တစ်ခုတည်းနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော အခြား ကြိုတင်ငွေပေးကတ်မှ သို့မဟုတ် ငွေဖြည့်သွင်းခြင်းများ ပြုလုပ်ပါ။ Visa၊ Visa Electron၊ Vpain သို့မဟုတ် Mastercard ကတ်များ။
Postepay ကတ်ကို ထုတ်ပေးသူမှာ BancoPosta ဖြစ်သည်။ ဒါကို သုံးနိုင်ရမယ်။ BancoPosta လျှောက်လွှာကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ကြိုတင်ငွေပေးထားသော PostePay ကတ်ကို ပြန်လည်ဖြည့်သွင်းရန်အတွက် ဤဘဏ်၏ဖောက်သည်များဖြစ်နေသရွေ့၊
ယခင်ရွေးချယ်မှုများတွင် ကျွန်ုပ်တို့လုပ်နိုင်သည် ပိုက်ဆံလွှဲပြောင်းပါ Postepay ကြိုတင်ငွေပေးအကောင့်တစ်ခုမှ အခြားအကောင့်တစ်ခုသို့ အသုံးပြုပါ။ ခရက်ဒစ်ကဒ်သို့မဟုတ်ဒက်ဘစ်ကဒ် Postepay ကတ်ကို အားပြန်သွင်းရန် ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင့်နှင့် ဆက်စပ်နေသည်။
အွန်လိုင်းတွင် အားပြန်သွင်းရန် မကြိုက်ပါက သို့မဟုတ် သင့်တွင် ထိုရွေးချယ်ခွင့်မရှိပါက အရိုးရှင်းဆုံး ရွေးချယ်မှုမှာ ပြီးသွားပါပြီ။ စာတိုက်ကိုသွားပါ။ Correo Italia မှ
Correo Italia ရုံးတိုင်းမှ၊ သင်၏ကြိုတင်ငွေဖြည့်ကတ်ကို ငွေဖြည့်ရန်အတွက် သင်၏ ခရက်ဒစ် သို့မဟုတ် ဒက်ဘစ်ကတ်ကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ သုံးလို့လည်းရပါတယ်။ ငွေသား သို့မဟုတ် ရိုးရာခရက်ဒစ် သို့မဟုတ် ဒက်ဘစ်ကတ်၊ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ ဘဏ်သည် BancoPosta မှဖြစ်ရန်မလိုအပ်ပါ။
Postamat ATM စက်များ
ချေးထားသော Postepay ကတ်ကို အားပြန်သွင်းရန် နောက်ထပ် စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီး အမြန်ဖြေရှင်းနည်းမှာ အသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်။ ငှေကိုငျစာရေး. ATM မှတဆင့် ကျွန်ုပ်တို့တွင်ရှိသော အခြားသော Postepay ကြိုတင်ငွေပေးကတ်၊ BancoPosta မှ ခရက်ဒစ် သို့မဟုတ် ဒက်ဘစ်ကတ် သို့မဟုတ် Visa၊ Visa Electron ကွန်ရက်နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည့် မည်သည့်ဘဏ်မှမဆို ခရက်ဒစ် သို့မဟုတ် ဒက်ဘစ်ကတ်ကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ နှင့် Maestro
Postepay ကတ် အရောင်းအမှတ်မှ
Postepay ကြိုတင်ငွေပေးကတ်များကို စာတိုက်များတွင် ရောင်းချရုံသာမက အခြားသော လုပ်ငန်းများတွင်လည်း ရရှိနိုင်ပါသည်။ ဆေးလိပ်သောက်သူများ၊ အရောင်းဆိုင်များနှင့် ဈေးဝယ်စင်တာအချို့။
ဆိုင်မျိုးစုံတွင် ရနိုင်သောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကြိုတင်ငွေပေး Postepay ကတ်ကိုလည်း ပြန်လည်အားဖြည့်နိုင်စေပါသည်။ ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေကတဆင့်
La အနည်းဆုံးအားပြန်သွင်းပါ လည်ပတ်မှုတစ်ခုလျှင် အများဆုံး 1 ယူရိုဖြင့် 997,99 ယူရိုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် Postepay ကြိုတင်ငွေပေးကတ်ကို စာတိုက်များမှတစ်ဆင့် ငွေဖြည့်သွင်းလိုပါက၊ အခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှတစ်ဆင့် ထိုသို့ပြုလုပ်ရန်အတွက် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကတ်နှင့် တရားဝင်သက်သေခံစာရွက်စာတမ်းနှစ်ခုစလုံးကို တင်ပြရန် လိုအပ်ပါသည်။
အီတလီအခွန်အေဂျင်စီမှ ထုတ်ပေးသော အခွန်ကုဒ်ပါရှိသည့် ကတ်ကိုလည်း လိုအပ်ပါသည်။ ဒေသဆိုင်ရာကျန်းမာရေးကတ် သို့မဟုတ် ဘဏ္ဍာရေးကုဒ်ထောက်ခံချက်ပါရှိသော အီလက်ထရွန်းနစ်အထောက်အထားကတ်။
ကိုယ်ကာယအားပြန်သွင်းချင်ပေမယ့် အိမ်ကနေ မပြောင်းချင်သူတွေအတွက် နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ ရွေးချယ်မှုတစ်ခုကတော့ အိမ်ကနေ အလုပ်ခွင်ကနေ အဆင်ပြေပြေနဲ့ Correo Italia ၏လုပ်ပိုင်ခွင့်ရစာပို့သမား Posamat၊ Postepay သို့မဟုတ် Maestro ကတ်ဖြင့် ပေးချေခြင်း။
ဒါဟာအစရှိနိုင်ပါသည် စာပို့သမားထံ လာရောက်တောင်းဆိုပါ။ အပိုအပ်ချုပ်စရာမလိုဘဲ သင့်အိမ် သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းခွင်တွင် ပြန်လည်အားသွင်းခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သော ကုန်ကျစရိတ်ထက် ကျော်လွန်သည် (အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း 1 ယူရိုဖြစ်သည်)။
အားလုံး BPM အုပ်စုဖောက်သည်များဤဘဏ်အုပ်စု၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သော ဘဏ်များထဲမှ တစ်ခုတွင် ငွေရှင်းအကောင့်တစ်ခုရှိပြီး၊ ၎င်းတို့၏ကတ်များကို ၎င်းတို့၏ အွန်လိုင်းဘဏ်လုပ်ငန်းပလပ်ဖောင်းမှတစ်ဆင့် ပြန်လည်ဖြည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။ ၎င်းတို့သည် ၎င်းတို့၏ ပေါ်တယ်ရှိ အားပြန်သွင်းမှုအပိုင်းကို ရှာဖွေပြီး Postepay ကို ရွေးချယ်ရန်သာ လိုအပ်သည်။
အရွယ်မရောက်သေးသူအား ဤကတ်အမျိုးအစားကို အသုံးပြုစေလိုသောအခါတွင် အသင့်လျော်ဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အလိုအလျောက်ဓာတ်အားကို set up ဤဆောင်းပါးတွင် ဖော်ပြထားသော မတူညီသော platform များမှတဆင့်။
အလိုအလျောက် အားပြန်သွင်းပေးနိုင်ပါတယ်။ အပတ်စဉ်၊ 15 ရက်တိုင်း သို့မဟုတ် လတိုင်း. သို့မဟုတ်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤကတ်၏လုပ်ဆောင်ချက်ကို ပြင်ဆင်သတ်မှတ်နိုင်သည်၊ သို့မှသာ လက်ကျန်ငွေသည် သတ်မှတ်ထားသောပမာဏတစ်ခုအောက်ကျသွားသောအခါ၊ ကျွန်ုပ်တို့ယခင်ရွေးချယ်ထားသည့် ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းနှင့် အလိုအလျောက် ပြန်လည်အားဖြည့်ပေးမည်ဖြစ်သည်။
ဤဆောင်းပါးတွင်ဖော်ပြခဲ့သည့် မတူညီသောနည်းလမ်းများဖြင့် ပြန်လည်အားသွင်းခြင်းအားလုံးကို ပြုလုပ်ပါသည်။ ချက်ချင်းပြီးတယ်။ထို့ကြောင့် Postepay ကတ်ပေါ်ရှိ ငွေဖြည့်သွင်းလက်ကျန်ကို နောက်ရက် သို့မဟုတ် ရက်ပေါင်းများစွာ စောင့်ရန် မလိုအပ်ပါ။
ဖုန်းငွေဖြည့်ပါ » ကုမ္ပဏီများ » Postepay ကြိုတင်ငွေပေးကတ်ကို ငွေဖြည့်ပါ။